Hiran State - News: Wararkii ugu danbeeyey arimaha Somaliya.
Wararkii ugu danbeeyey arimaha Somaliya.
Somaliya:(HS)-Siyaasadii guud ee madaxweynaha Somaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo fashil ku dhaw halka maalmaha soo socda baarlamaanka Somaliya ka arinsanayo dhacdooyinkii ugu danbeeyey ee ka dhacay shirkii Kampala, halka banaan baxyadii dhawaantan ka dhacay dal iyo dibad ee lagu taageerayey R/wasaare Farmaajo ay waji kale u yeeleen siyaasadahii qalafsanaa ee beesha caalamka kedib markii ay meesha ka baxday in ay madaxweynaha Somaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanku heystaan taageerada shacabkooda.
Madaxweynaha Somaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka siyaasadii qar iska tuurka aheyd ee ay qaateen iyo sida ay shacabku u diideen waxey cashir fiican u noqon doontaa hogaamiyaasha imaan doona mustaqbalka dhaw iyo kan fog. shirkii Kampala ujeedo kasta oo laga lahaaba kama soo bixin wax dan u ah shacabka Somaliyeed iyo dalkaas bur bursanaa mudada 21 sano ah.
Wax yaabaha ay ilaa hada shacabku qaadan waayeen waxaa ka mid ah madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka ha joogeen R/wasaaraha ha baxo maxey tahay qaladka gaarka ah ee uu galay Farmaajo oo aysan galin madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka?
1- Waa la kartey hadii hay'ddaha dowlada oo dhan waqti isla eg ku darsadaan.
2- Waa la gartay in doorsho la iclaamiyo si wadanka looga saaro xiligan kumeel gaarka inta arimaha shaqsigaa meel leyska dhigo.
3-Waa la gartaa in ay masuuliyiinta ugu sareeya iyaga qilaafkooda xaliyaan si dalka iyo dadka loo bad baadiyo.
Intaas waxii dhaafsiisan shacabka Somaliyeed xal uma ahan in madaxweyne African ah uu waxii uu doono ka sameeyo masuul Somaliyeed isagoo isticmaalayo madaxweynaha Somaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo sida hada muuqata uu dhaawac weyn soo gaaray siyaasadii guud ee ay ka lahaayeen dalka iyo dadka Somaliyeed.
Baarlamaanka Somaliya iyo waajibaadka laga doonayo kedib markii aanu shacabka Somaliyeed ka soo aruurinay fikirkooda rasmiga ah 24tii saac ee ina dhaaftay waxeyna yiraahdeen.
Mudanayaasha baarlamaanka Somaliya waxaa u furan 3 qodob midkood iney qaataan waxii ka soo haray waxey u muuqaal egaan doonaan kuwo aan waxbo dhaamin madaxweynaha isagoo nool ogolaaday in wasiirkiisii 1aad oo aaan waxbo ka haleyn si uu u helo sanad dheeri ah oo uu xukunka sii joogo halkii uu isaga ceyrin lahaa R/wasaaraha Somaliya ku eegtay madaxweyne African ah inuu ceyriyo oo waliba ku farax sanaado arintaas. amaba gudoomiyaha baarlamaanka oo ay shacabka Somaliyeed aaminsan yahiin inuu yaqaano waxa loo yaqaano sixir maadama uu afka u dhigtay 550 mudane oo aan marnaba lagu maqal waali iyo iney dhimirka beeleen hadane maalinkasta aduunyada u iibgeynayo sidii xoolahii hadane waxii uu u soo qaado siduu doono ka yeelo.
Qeexid arinta gudoomiyaha baarlamaanka.
a)- Dhawr isbuuc ka hor waxuu lahaa 3 sano ayaan aduunyada idiinka soo qaaday doorasho ayaana la galayaa mudanayaasha baarlamaanka.
b)- Maanta waxuu leeyahay 1 sano ayaan idiin wadaa waxii hore ma jiraan laakinse bishaaro waxaan ceyriyey R/wasaarahii Somaliya.
c)- Berito waxuu hadane dhihi doonaa kaalaya Kenya imaada waxii hore waxbo kama jiraane.
Go,aanka ugu macquulsan ee baarlamanka iyo qofkasta oo muwaadin Somaliyeed ah laga doonayo waa inuu xil iska saaro .
1- In wadanka ay doorasho ka dhacdo waliba deg deg ah cidii shacabka Somaliyeed kasbankartana ay calafkeeda halkaasi ka raadsato si looga hortago in R/wasaare Somaliyeed qaabka aanu hada aragno oo aan u rooneyn damiirka Somalinimo, bini'aadaminimo iyo waliba ISlaamnimo oo waxa hada Kampala ka dhacay yahiin wax aan marnaba la aqbali karin looga bad baado hada kedib.
2-In mudanayaasha baarlamaanka Somaliya iyagoo eegaya maslaxada umada Soaliyeed ay xilka ay hayaan wey ku fashilmeene iscasilaan.
3- Inaysan ogolaan in R/wasaaraha Somaliya hadii uusan xilka si toos ah uga qaadeyn madaxweynaha Soamliya sidii aanu ku naqiinay siyaasadaha aduunka iyo madaxdii dalka soo martay ineysan marnaba ogolaan in Farmaajo qaabkan hada inoo muuqda ku baxo.
Xalka iyo fikirkii aanu shacabka ka soo aruurinay intaasi ayuu noqday shaleyto ilaa xaleyto. sidoo kale banaanbaxyadii maalin hore dhacay oo kale hadey hal maalin oo kale dhacaan oo waliba lagu cambaareynayo shirkii Kampala Somaliya rajo weyn ayaa u soo muuqata shacabka Somaliyeed oo aan horey codkooda loo maqli jirin.
Waxii ka dhacay Kampala iyo waliba shirarka inta badan dibada loogu qabto Somalida waxasi oo dhan waa dhag iyo lugooyo lagu sameynayo shacabka marka si ay bulshadu u wada guuleysato waa in baarlamaanka, golaha wasiirada, shacabka Somaliyeed, mediyaha iyo intiiba talo ka geysan karto arimaha cakiran ee Soamliya iney ku dadaalaan sidii uu wadankani u noqon lahaa wadan ka badax banaan beesha caalamka si taasi loo hirgaliyana waa in lag abaxaa nidaamkan kumeel gaarka amab TFGda.
La soco warakeena danbe.
· admin on June 12 2011 12:29:53 · 1 Comment · 1689 Reads ·
#1 | wqw on August 15 2011 09:15:23
14,637,733 unique visits